ISan Pedro de Alcántara, ubuncwane kwiCosta del Sol | Ukuhamba kwe-Absolut
Ebekwe kufutshane kakhulu noMarbella wendalo iphela, iSan Pedro de Alcántara imele into echaseneyo, Oko kukuthi, uxolo lwedolophu yaseSpain. Isiseko saso sisandula ukwenziwa, kuba yazalwa njengekholoni yezolimo eMarquis del Duero kwi1860, yenye yezona zihambele phambili ngexesha layo.
Okwangoku, idolophu yaseMalaga ibalasele ngezindlu zayo ezimhlophe kunye nokuba nazo zonke iinkonzo eziqhelekileyo kubemi abangaphezu kwamawaka angamashumi amathathu anesihlanu amawaka. Nangona kunjalo, ngaphandle kokusekwa kwiminyaka elikhulu elinamanci mahlanu eyadlulayo, ikunika izikhumbuzo ezinomdla kakhulu kunye neendawo ezintle zokuzonwabisa ngendalo.
1 Yintoni ongayibona eSan Pedro de Alcántara
1.2 Amabhafu amaRoma aseLas Bóvedas
1.3 Icawa yaseSan Pedro de Alcántara
1.4 Indawo yaseSan Luis
2 Izinto zokwenza eSan Pedro de Alcántara
3 Imozulu e San Pedro de Alcántara
4 Yintoni oza kuyitya eSan Pedro de Alcántara
Yintoni ongayibona eSan Pedro de Alcántara
Abemi baseMalaga baneendawo ezininzi ekufuneka undwendwele kuzo, ukusuka iintsalela zezinto zakudala paleochristian kunye neRoma kwizakhiwo eziyinxalenye ye- ilifa lemveliso loyilo. Kwaye nezinye izikhumbuzo ezinomdla kakhulu.
Uya kuzifumana ezi zintsalela emlonyeni woMlambo iGuadalmina, kwindawo apho kudlula khona indlela yaseRoma iHerculean, edibanisa Cádiz kunye neCagagena. Okwangoku, icebo le-basilica aligcinwanga, libonisa umzimba weentaba ezintathu kunye neepes ezimbini ezichaseneyo. Yakhiwa phakathi kwenkulungwane yesi-XNUMX neyesi-XNUMX yeXesha Eliqhelekileyo kwaye kufanele ukuba yayiyinxalenye yesixeko sase UCilniana, obukho babo, nangona kunjalo, akukho bungqina.
Kwakukho necropolis apho. Kwelinye icala, lonke ilifa elifunyenwe kunye nala masalela (amatye amangcwaba, iinqanawa, iigugu kunye nezinto zangcwaba) likwiMyuziyam yeSizwe ye-Archaeological eMadrid. Icawe leyo Isikhumbuzo sembali kwi-1931.
Amabhafu amaRoma aseLas Bóvedas
Ungathatha ithuba lokubatyelela xa usiya kwi-basilica, kuba ziimitha ezimakhulu mahlanu ukusuka kuyo. Sisakhiwo esine-octagonal, esinamagumbi asibhozo ajikeleze igumbi eliphakathi, kwaye simi phakathi kwenkulungwane yesi-XNUMX neye-XNUMX emva kukaKristu.
Yakhelwe kwikhonkrithi eyomeleleyo ke iye yakwazi ukumelana novavanyo lwexesha kakuhle. Ukongeza, inento eyodwa yokuba iisilingi zayo zigqunyiwe. Ukususela ngo-1936 ibe sisikhumbuzo seLizwe ukusukela ngo-2007 Iaseti yoMdla weNkcubeko.
Kwelinye icala, ecaleni kwemithombo eshushu uya kuyifumana beacon tower Eyakhelwe kwinkulungwane ye-XNUMX njengenxalenye yemilindelo eyayilawula ukufika kwabaphangi abavela kuMntla Afrika kunxweme. Ukuphakama kwayo ziimitha ezilishumi elinesithathu kwaye isiseko sayo sinobubanzi besibhozo.
Icawa yaseSan Pedro de Alcántara
Yavulwa ngo-1869, iyaphendula Uhlobo lobukoloniyali kwaye inesakhiwo esinqabileyo esine-prism-tower tower ekhumbuza iPortichuelo de Antequera. Inesicwangciso se-basilica kwaye sesinye sezakhiwo ezimbalwa ezishiyekileyo kwikoloni yoqobo yezolimo enike inani labemi ngoku.
Indawo yaseSan Luis
Ukwakhiwa kwayo kususela ngo-1887 njengekhaya losapho lakwaCuadra Raoul, nelathi lafumana ubunini beli koloni ngo-1874. Iyathakazelisa kuba ayinanto yakwenza nesimbo saseAndalusi. Endaweni yoko, iyaphendula isiFrentshi yelo xesha. Inesicwangciso somgangatho oxande kunye nobude obuthathu. Uphahla luxhonyiwe kwaye phantsi kwalo kukho iindwendwe ezintathu ezingacwangciswanga. Esi sakhiwo uza kusifumana ngokulula nanjengoko ngoku isisikhundla se-Ofisi kaSodolophu.
Ngaphandle kwentsalela yezinto zakudala esizichazileyo kuwe, esi sesona sakhiwo sidala eSan Pedro de Alcántara, kuba sasakhiwe ngaphambi kokusekwa kwethanga. Ngokukodwa, isusela ngo-1823 kwaye umsebenzi wayo yayikukwenza iswekile. Nangona kunjalo, kamva yanikezelwa imodeli yefama, isikolo sabaphathi bezolimo ababenguvulindlela kulo lonke elaseSpain.
Kufuneka kuthiwe kule ndawo kulinyiwe ushukela kwiinkulungwane ukusukela oko yenye yeendawo ezimbalwa eYurophu apho kukho iimeko ezifanelekileyo ukuze sikhule esi sityalo. Namhlanje uya kufumana kwesi sakhiwo iziko lenkcubeko.
Njengokuba iswekile yayininzi kule ndawo, ikholoni yasungula le distillery ngo-1871. Ngapha koko, yenze ibranti nge-molasses. Esi sakhiwo sine-nave yoxande kunye nenqaba ende. Kodwa, ngaphezulu kwako konke, its umzobo, ihonjiswe ngomda kwiithayile ezimhlophe naluhlaza kunye nezinye izinto ezikhululekileyo.
Izinto zokwenza eSan Pedro de Alcántara
Idolophu yaseMalaga intle kubeka apho ungonwabela ilanga nolwandle. Ngokufanayo, kukho ifayile ye- uhambo olungezantsi phantse iikhilomitha ezine ubude ezinxibelelana nePuerto Banús kwaye apho uya kufumana iindawo ezininzi zokutyela kunye neeresityu ezininzi zoopopayi.
Kodwa, ukuba uyathanda ukuhamba, ungayenza kunye neBoulevard okanye ngeParque de los Tres Jardines. Kwaye ngaphezu kwako konke, unayo Iindlela ezintle zokunyuka intaba eSierra Blanca. Umzekelo, leyo inyukela kwiCruz de Juanar, phantse i-XNUMX yeemitha ukuphakama, kunye naleyo inyukela kwincopho yeLa Concha.
Imozulu e San Pedro de Alcántara
Zombini idolophu kunye nayo yonke indawo yaseMarbella bane Imozulu efudumeleyo yetempile, ngobusika obumnene nobushushu obushushu. Imvula incinci kakhulu kwaye iqondo lobushushu lonyaka limalunga neshumi elinesibhozo iqondo lobushushu. Ngokwenxalenye yayo, iiyure zokukhanya kwelanga ngonyaka phantse zifike kumawaka amathathu. Ke ngoko, naliphi na ixesha kulungile ukuba undwendwele idolophu yaseMalaga, nangona ezona nyanga zibalaseleyo zezo NgoJuni nangoSeptemba, xa imozulu intle kodwa ingabi shushu njengoJulayi okanye uAgasti.
Yintoni oza kuyitya eSan Pedro de Alcántara
Isisu sokuqina sale ndawo asihlukanga kangako kolo lonke iCosta del Sol.Njengommandla wonxweme, izitya zawo zisekwe intlanzi entsha. Ngokumalunga nokulungiswa kwayo, kukho iindidi ezimbini zokutya ekufuneka uzizamile. Inye ngu "Iintlanzi eziqhotsiweyo, ethatha i-anchovy, i-horse mackerel kunye ne-mullet ebomvu njengezinto eziluhlaza. Kwaye enye enye isardadi skewer, olungiswayo ngokuzifaka eludongeni nasekuzoseni phezu komlilo.
IGazpacho sisitya sendawo, salmorejo kunye ajoblanco. Le yokugqibela yisuphu ebandayo enamanzi, ioyile yomnquma, igalikhi, ityuwa, isonka kunye neeamangile. Ngamanye amaxesha iviniga iyongezwa kuyo kwaye ihlala ityiwa neziqwenga zemelon okanye iidiliya. Ngokubhekisele kwiilekese, kuya kufuneka unuke iikeyiki zeoyile, iiborrachuelos kunye nemiqulu yewayini.
Kwelinye icala, kwidolophu yaseMalaga kukho inani elikhulu leeresityu oko akunikezeli kuphela ukutya kwasekuhlaleni. Unokonwabela ukutya kwehlabathi kunye nezitya ezisekwe kwi-gastronomy yanamhlanje.
Ukuqukumbela, kuninzi iSan Pedro de Alcántara ekufuneka ikunike. Akufanele uphoswe lithuba lokundwendwela le ndawo inomtsalane eMalaga. Akukho nto inokuphazamisa ezinye iidolophu ezidumileyo eCosta del Sol ezinje ngeMijas, UNerja, Fuengirola, Benalmádena okanye iTorremolinos.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » ISan Pedro de Alcantara